Ezubere ụzọ izizi ịnabata n'ụlọ gị | Bezzia
Susana godoy | 09/09/2021 14:00 | Ngwa ụlọ
Nkọwa ọ bụla nke ịchọ mma dị mkpa. Yabụ, mgbe anyị na -achọ ụlọ anyị mma, anyị na -agbalị mgbe niile inye ya mmetụ pụrụ iche na nke onwe. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na -ahọrọ ịhọrọ maka mbido, ị ga -enwe ihu ọma na ndị a akpa ime ụlọ izizi. A na -ekwukarị na leta mkpuchi kwuru ọtụtụ ihe gbasara ime na na nke a ọ gaghị adị obere.
N'ihi ekele maka ọnụ ụzọ ndị a, ọ joyụ ga -abụ akụkụ nke nzọụkwụ mbụ anyị na -ewere. Ị nwere ike họrọ akpaokwu, ihe onyonyo ma ọ bụ ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ ga -esite n'ala. Ị ga -abụ otu n'ime ndị agbata obi na -atọ ọchị n'ime ụlọ ahụ. Ị naghị eche otu a?
1 Ozi kacha mma maka ndị ọbịa na -ebute akpa ụzọ
2 Doormats ịnabata n'ụzọ mbụ
3 Ndị na -ahụ ụzọ ụzọ
4 Usoro ọkacha mmasị gị
Ozi kacha mma maka ndị ọbịa na -ebute akpa ụzọ
A na -anabata mgbe niile, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, nleta ụlọ. Mana n'ezie, n'agbanyeghị na anyị achọghị igosi na anyị enweghị isi, anyị na -agbachi nkịtị maka ihe anyị chere. Yabụ, ọ bụrụ na ịmaghị otu esi ekwu na ha abịaghị aka efu, ọ nweghị ihe dị ka ịkụ nzọ ụfọdụ ndị na -aga n'ọnụ ụzọ nwere ụdịdị ahịrịokwu kpọmkwem dị ka: 'Ndị ọbịa kacha elu na -ebuli biya na mkpofu ala.' Ikekwe n'oge ịbanye ha na -ejighị ya kpọrọ ihe ma ọ bụ opekata mpe, ịmụmụ ọnụ ọchị ga -akọwapụta ma ọ bụrụ na -amasị gị, ị nwere ike zụta ya ebe a otu.
Ụkwụ ndị ọzọ na -ezo aka na mmanya, ma ọ bụ ịhapụ ọnọdụ ọjọọAgbanyeghị na ọ bụghị ihe, ọ bụ ihe anyị nwere ekele. Ụfọdụ ndị ọzọ nwedịrị iwu nke ụlọ, ka onye ọ bụla ghara iju anya ịbanye. Ya mere, ị ga -amarịrị ihe ị na -emegide. Ụdị dị ka nke a o doro anya na ọ ga -eju onye ọ bụla na -agafe. Yabụ na ya na mbido mbụ, dịka anyị siri masị ya.
Doormats ịnabata n'ụzọ mbụ
Okwu a bụ 'nnabata' dịkwa ọtụtụ n'ime ngwa ndị a. Mana ọ bụ eziokwu na ndị anyị na -ahụ na Amazon na -eburu ya n'ụzọ pụrụ iche. N'ihi na ọ bụ naanị n'okwu nwere ike ọ gaghị ezu ezu, yabụ, anyị na -eme nzọ ime na -ezo aka na fim dị ka 'Star Wars' ma gafee ha n'akụkụ gbara ọchịchịrị nke a ọnụ ụzọ dị mkpa.
Agbanyeghị na ọ bụrụ na egwu na -amasị gị, ị gaghị enwe ike ichefu otu n'ime Abụ egwu Spanish dị ka nke Miguel Ríos bụrụ n'oge ahụ. Ọ dị mma ugbu a, ị nwekwara ike nweta ya n'ụkwụ gị na enweghị ike ikwu otu echiche dị ka nke ahụ ebe a anyị na -egosi gị. A ga -enwe echiche na -amasị gị!
Ndị na -ahụ ụzọ ụzọ
N'ezie ị nwekwara ike ime ihe nkwụchi ọnụ ụzọ gị n'ụdị ahaziri iche, ka e wee nwee ike ịnọchite anya ezinụlọ niile n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Yabụ, ihe kacha mma ị ga -eme bụ nzọ na idobe aha gị n'okpuru akpụkpọ ụkwụ ọ bụla n'ime imewe ka ha pụtara. ebe a. Ọ bụrụ na ịnweghị ụmụaka, ị nwere ike nwee anụ ụlọ, ha nwekwara ike nọrọ ya n'ọnụ ụzọ gị, dị ka a ga -asị na ị bi naanị gị ma ọ bụ dị ka di na nwunye. N'ihi na a ga -anọchite anya ụdị ezinụlọ n'echiche dị otu a.
Usoro ọkacha mmasị gị
Ọ bụrụ na enwere usoro nke kacha amasịkarị oge niile bụ 'Enyi'. Ugbu a ha ezukọtala ọzọ n'ụdị ihe nkiri ị nwere ike ịnụ ụtọ ya n'elu ikpo okwu. Mana n'azụ bụ ihe egwuregwu niile nke ụlọ abụọ na ndị enyi 6 wetara anyị ọtụtụ ọchị karịa ka a tụrụ anya ya. Ihe ọchị nke na agbanyeghị ka oge na -aga n'ihu na -enwe nnukwu ihe ịga nke ọma, yabụ, ọ nweghị ihe dị ka icheta otu ihe atụ dị ugbu a. Ebe anyị niile maara ebe a na -ere kọfị ebe ha nwere sofa nke ha ma na -ezukọ ụbọchị dum. Ugbu a ị nwere ike ịnabata 'Central Perk' ị nwere ebe a. Nke ahụ ọ bụghị ezigbo echiche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ngwa ụlọ » Onu uzo mbu iji nabata ulo gi
Ngwa ọhụrụ Malababa maka ọdịda